IMarble Mosaic - i-Morningstar Stone Co, Ltd.
Yonke imikhiqizo eqediwe iyadingeka ukwenza ukuhlangana ngaphambi kokushiya izitshalo zokukhiqiza, kusuka kumapaneli alula wokusika kuya kusayizi we-CNC amaphethini aqoshiwe namaphethini wejet yamanzi. Le nqubo ivame ukushiwo njenge-dry-lay. Indawo eyomile eyanele yenziwa endaweni evulekile futhi engenalutho ngendwangu ethambile yomsamo wensimbi phansi nesimo esihle sokukhanyisa. Abasebenzi bethu bazobeka phansi amaphaneli womkhiqizo wokuqeda phansi ngokuya ngomdwebo wesitolo, esikwazi ukubheka ngawo:
1) uma umbala ungaguquguquki ngokwendawo noma isikhala ngasinye;
2) uma imabula esetshenziselwa indawo eyodwa inesitayela esifanayo, etsheni elinemithambo, lokhu kuzosisiza ukubheka ukuthi umkhombandlela we-vein ubhukiwe noma uyaqhubeka yini;
3) uma kukhona izingcezu zokuqhekeka nezinqenqemeni ezizolungiswa noma zishintshwe;
4) uma kukhona izingcezu ezinokukhubazeka: izimbobo, izindawo ezinkulu ezimnyama, ukugcwaliswa okuphuzi okudinga ukushintshwa. Phela amapaneli ayabhekwa futhi afakwa ilebula. Sizoqala inqubo yokupakisha. ▼